Nhau - Paunenge uchishandisa iyo yekucheka muchina kugadzira, iyo yekucheka maitiro inofanirwa kutariswa kune uye haifanire kutorwa zvishoma.
Paunenge uchishandisa iyo yekucheka muchina kugadzirwa, iyo yekucheka maitiro inofanirwa kutariswa kune uye haifanire kutorwa zvishoma. Naizvozvo, chinyorwa ichi chinosanganisa iyo yakadzvanywa inoumbwa neBOPP / LDPE inoumbwa firimu, matambudziko ehunhu anoitika mune yekucheka gadzira maitiro uye nematambudziko anoenderana emuchina wekucheka kuti uongorore.
1. Chengetedza kutema nekukurumidza
Kana uchipinda zvakajairika kugadzirwa, kumhanyisa kwekucheka muchina kunofanirwa kunyatso tevera maitiro anodikanwa. Yakanyanya kukwirira inochinjawo iyo yekucheka mhando. Naizvozvo, nekudzora iyo yekumhanyisa kumhanya, iwo hunhu hunodiwa hwekucheka hunowanikwa. Nekuti, mukugadzirwa, vamwe vashandisi vanogadzira zvinowedzera kumhanyisa kwekucheka kuitira kuti vawedzere kuburitsa uye kuvandudza mabhenefiti avo. Izvi zvichaita kuti iyo bhaisikopo riwanikwe kune refu longitudinal streaks uye kupatsanura-rukoko mhando matambudziko pasi pekumhanya-mhanya kushanda.
2. Sarudza yakakodzera yekucheka maitiro zvinoenderana nemidziyo uye kuita kwefirimu
Mukugadzirwa kwakajairwa, zvinodikanwa kutora tekinoroji yakakodzera yekugadzira zvinoenderana nemashandiro emidziyo, izvo zvemukati zvemufirimu, nemhando dzakasiyana uye zvakatemwa zvemufirimu. Nekuti maitirwo enzira, nzira dzekuzivisa, uye hunhu hwemafirimu akatsemuka akasiyana, maitiro acho anofanirwa kunyatsogadziriswa pachigadzirwa chimwe nechimwe.
3. Teerera kusarudzo chaiyo yezvitoro zvebasa
Mukugadzirwa, kuwanda kwekushandiswa kweye yega chiteshi cheyakagadzika kwakasiyana, saka mwero wekupfeka wakasiyanawo. Naizvozvo, pachave nemusiyano mukuita. Semuenzaniso, pane mashoma mitsara yakatwasuka yekucheka zvigadzirwa mune iri nani mamiriro. Pane zvinopesana, kune mamwe akawanda longitudinal mitsetse. Naizvozvo, mumwe nemumwe anoshanda anofanirwa kutarisisa sarudzo chaiyo yemabasa, kupa zvizere kumamiriro ezvinhu emidziyo, kubata mashandisiro epano saiti, kugara uchipfupikisa ruzivo, uye kuwana kushandiswa kwehunhu hwakanakisa hwemidziyo.
4. Iva nechokwadi chekuchena kwefirimu
Uye zvakare, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti panguva yekurovera, yega yega runyorwa rwefirimu rwunovhurwazve uyezve kudzoreredza, izvo zvinogadzira mamiriro ekupinda kwezvinhu zvekunze. Sezvo chigadzirwa chemufirimu chaicho chinonyanya kushandiswa kurongedza chikafu nemishonga, Naizvozvo, hutsanana zvinodiwa zvakanyanya, saka zvakafanira kuona kuti yega yega roll yefirimu yakachena.